Kitra afrikanina: homena an’i Kameronina ny “Can 2021” | NewsMada
Kitra afrikanina: homena an’i Kameronina ny “Can 2021”
Nambaran’i Ahmad, filohan’ny Kaonfederasiona afrikanina baolina kitra (Caf), fa homena an’i Kameronina ny fampiantranoana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can), ho an’ny taona 2021, rehefa nesorina tamin’izy ireo ny fandraisana izany, ho an’ny taona 2019. Nambarany tamin’ny mpanao gazety fa homena fotoana i Kameronina hahafahan’izy ireo manamboatra ny fotodrafitrasa handraisana izany. Izay ny anton’izao fanapahan-kevitra izao.
Marihina fa tokony ho ry zareo Ivoarianina ny handray io “Can 2021” io, araka izay efa notinapaka ny taona 2014. Nomarihin’i Ahmad hatrany fa hita ho tsy mbola vonona ny hampiantrano io “Can” hatao ny taona 2021 io koa ry zareo Ivoarianina ka izay ny tsy nanomezana azy ireo izany.
Na izany aza, hatao any Côte d’Ivoire ny “Can 2023”. Betsaka, araka izany, ny fiovana ho an’ity “Can” ity. Raha tsiahivina, tsy mbola fantatra izay handray ny “Can 2019”, hatreto. Firenena roa ny hiady hampiantrano izany: i Maraoka sy i Afrika Atsimo. Tsy nasian’i Ahmad resaka kosa ny amin’i Ginea Ekoatorialy, tokony handray ny “Can 2023”.